Content Delivery Network (CDN) ဆိုတာဘာလဲ။ | Martech Zone
Hosting နှင့် bandwidth တို့၏စျေးနှုန်းများဆက်လက်ကျဆင်းနေသော်လည်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသည်ပရီမီယံ hosting platform တစ်ခုတွင်အိမ်ရှင်အဖြစ်ထားရှိရန်မှာစျေးကြီးနေဆဲဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မင်းကငွေအများကြီးမပေးရင်မင်းရဲ့ site ကတော်တော်နှေးနေတယ်။ သင့်ရဲ့သိသိသာသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပမာဏဆုံးရှုံး.
သင်၏ site ကို hosting လုပ်သောသင်၏ဆာဗာများကိုသင်စဉ်းစားသောအခါ၎င်းတို့သည်တောင်းဆိုမှုများစွာနှင့်သည်းခံရမည်။ ထိုတောင်းဆိုမှုများမှအချို့သည်သင်၏တက်ကြွသောစာမျက်နှာကိုမထုတ်ယူမီသင်၏ဆာဗာသည်အခြားဒေတာဘေ့စ်ဆာဗာများသို့မဟုတ်တတိယပါတီ application application interfaces (APIs) များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
အသုံးပြုသူများအပေါ်ပုံနှင့်ဤဆာဗာတောင်းဆိုမှုများအတွက်အချိန်မီသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံနိုင်ဘူး။ ဤအတောင်းဆိုမှုများတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကြာပါတယ်။ အချိန်သည်အနှစ်သာရ၏အဓိကကျသောအချက်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသည်စာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသူလား၊ သို့မဟုတ်သင့်အကြောင်းအရာကိုခြစ်ရန်လာမည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် bot တစ်ခုလား။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးကသင့်ဆိုဒ်နှေးနေလျှင်သင်၏စီးပွားရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ သင်၏စာမျက်နှာများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်မြန်ထားရန်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူကို snappy site တစ်ခုဖြင့်ရောင်းချခြင်းသည်ရောင်းအားကိုတိုးစေနိုင်သည်။ Google ကို snappy site တစ်ခုဖြင့်ပေးအပ်ခြင်းသည်သင်၏စာမျက်နှာများကိုအညွှန်းနှင့်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာဖိုင်ဘာများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်အင်တာနက်အခြေခံအဆောက်အအုံများရှိပြီးမလိုအပ်သောအမြန်နှုန်းနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများရှိသည့်ကမ္ဘာတွင်နေထိုင်နေစဉ်ပထ ၀ ီအနေအထားသည်ဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်၊ router များမှတစ်ဆင့်ဝက်ဘ်အိမ်ရှင်ဆီသို့တောင်းဆိုချက်တစ်ခုအကြားကြာမြင့်သည့်အချိန်တွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်နေဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ကျော
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်သင့်ဝဘ်ဆာဗာဟာဖောက်သည်တွေဆီကနေဝေးလေ၊ သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကသူတို့အတွက်နှေးလေလေပဲ။ အဖြေကိုတစ် ဦး အသုံးချဖို့ဖြစ်ပါတယ် အကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ယက်.
သင်၏ဆာဗာသည်သင်၏စာမျက်နှာများကိုဖွင့်ပြီးပြောင်းလဲနေသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ပြီး၊ API ကို တောင်းဆိုမှုများ၊ သင်၏ content ပေးပို့ကွန်ယက် (CDN) သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဒေတာစင်တာများရှိဖြန့်ဝေထားသောကွန်ယက်ရှိဒြပ်စင်များကိုသိုလှောင်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအိန္ဒိယသို့မဟုတ်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိသင်၏အလားအလာသည်သင်၏ site ကိုလမ်းပေါ်ရှိ visitors ည့်သည်များကဲ့သို့လျင်မြန်စွာမြင်နိုင်သည်။
Akamai သည် CDN နည်းပညာရှေ့ဆောင်ဖြစ်သည်
CDN များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များသည်သူတို့၏အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုအဆင့်သဘောတူညီချက်များ (SLAs)၊ ပေါ်လွင်လွယ်ကူမှု၊ လျှော့ချနိုင်မှုနှင့်သူတို့၏အမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်၍ လွတ်လပ်မှုအတော်အတန်များပြားနိုင်သည်။ ဒီမှာစျေးကွက်ထဲမှကစားသမားအချို့ရှိပါသည်။
CloudFlare ထွက်ရှိလူကြိုက်အများဆုံး CDN ​​များထဲမှဖြစ်နိုင်သည်။
သင်တို့အပေါ်မှာဆိုရင် WordPress, Jetpack အတော်လေးအားကောင်းတဲ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် CDN ကမ်းလှမ်း။ ငါတို့ site ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ Flywheel အဘယ်သူသည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ CDN ပါဝင်သည်။
StackPath CDN အလွန်သေးငယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမေဇုံ CloudFront အမေဇုန်ရိုးရှင်းသောသိုလှောင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု (S3) ဖြင့်အကြီးဆုံး CDN ​​သည်ယခုအချိန်တွင်စျေးအသက်သာဆုံး CDN ​​ပံ့ပိုးသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်များသည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာမျှသာရှိသည်။
ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်ကွန်ယက် or Akamai ကွန်ယက်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အတော်လေးရေပန်းစားသည်။
ကနေ image ကို Akamai ကွန်ယက်များ
သင်၏ပါဝင်မှုများကိုပုံရိပ်များနှင့်သာကန့်သတ်မထားပါနှင့်။ အချို့သောတက်ကြွသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်အချို့ကိုပင် CDN များမှပြနိုင်သည်။ CDNs များ၏အားသာချက်များမှာများစွာရှိသည်။ သင့် site latency တိုးတက်ခြင်းအပြင် CDNs သည်သင်၏ hardware server ကန့်သတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်၍ သင်၏လက်ရှိ server load နှင့်တိုးချဲ့နိုင်မှုကိုသက်သာစေသည်။
လုပ်ငန်းအဆင့် CDN များသည်မကြာခဏမလိုအပ်သောအပြင်အချိန်ပိုလည်းမြင့်တတ်သည်။ ပြီးတော့ CDN တစ်ခုသို့အသွားအလာကိုချထားလိုက်ခြင်းဖြင့် ၀ င်ငွေတိုးလာခြင်းနှင့်အတူသင်၏ hosting နှင့် bandwidth ကုန်ကျစရိတ်များကျဆင်းသွားတာကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ မကောင်းတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု! အပြင်က image ကိုချုံ့အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေသည့်ကွန်ယက်တစ်ခုရှိခြင်းသည်သင်၏ဆိုဒ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအစေခံရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်!
ထုတ်ဖော်: ငါတို့ဖောက်သည်များနှင့်တွဲဖက် StackPath CDN နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုချစ်!
Tags: ကျောက်စိမ်းAkamai ကွန်ယက်များAmazon cloudfrontCDNမိုးတိမ်အကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ယက်သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပိုမိုမြန်ဆန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲjetpack စီဒီထင်ရှားကျော်ကြားထင်ရှားကျော်ကြားသောကွန်ရက်များmaxcdnဝန်အချိန်လျှော့ချsite ကိုအရှိန်မြှင့်ဘာဖြစ်သလဲcdn ဆိုတာဘာလဲအကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ယက်ကဘာလဲWordPress
မေလ 8, 2012 မှာ 7: 13 pm တွင်
စဉ်ဆက်မပြတ် အလုပ်ချိန်သေချာစေရန် CDN တွင် အပိုထပ်နေသည့်အတွက် သင်သည် Dual-CDN ဗျူဟာကို အသုံးချနိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် CDN နှစ်ခုကြား တစ်ချိန်တည်းတွင် load balancing ရှိနိုင်သည်။ ဤဆိုက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို သင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။